Namoaka ny rafitra fanaraha-maso ny media an-tserasera mandeha ho azy hitadiavana ireo votoaty eksitiremista ny Rosiana mpiandraikitra ny sivana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2015 8:26 GMT
Hatramin'i Akin ka hatramin'i Foucault, manaramaso tsy mitsahatra ny manaramaso ireo fampitam-baovao an-tserasera amin'ny alalan'ny fitaovana mandeha ho azy ankehitriny ny Rosiana mpanao fanapenam-bava (sivana). Sary namboarin'i Tetyana Lokot.
Miasa ao Rosia ankehitriny ny rafi-pitaovana iray manadihady avy hatrany ny votoaty avoakan'ny fampitam-baovao an-tserasera manerana ny faritra rosiana miisa 19 hikarohana ireo votoaty voarara sy tsy ara-dalàna.
Eo am-panatontosana ny dingana beta (fanandramana matotra) ny rijan-kajy (algorithm) ny Roscomnadzor, saingy niteny tamin'ny Izvestia ny filohan'ny fanarahamaso ny fampitam-baovao rosiana, Aleksandr Zharov, fa hiasa feno manerana an'i Rosia ilay rafitra alohan'ny faran'ny taona 2016.
Ny asa voalohan'ny rafitra vaovao dia ny hamakafaka ny tranonkalam-baovao rosiana mikaroka ireo votoaty heverina ho tsy ara-dalàna eo anatrehan'ny andininy fahaefatra amin'ny lalànan'ny fampitam-baovaom-bahoaka rosiana, toy ny sary vetaveta, antso hanao herisetra na fampihorohoroana, fitaovana eksitremista, fanosihosena zava-masina, sns.. Nolazain'i Zharov tamin'ny Izvestia fa na dia mbola eo am-panandramana aza dia nahafan'ny mpanao sivana nahita fanitsakitsaka “indroa avo heny” noho ny taloha ny rijan-kajy. “Tsy mbola hanafay na iza na iza aloha izahay, satria mbola vaovao ny rafitra. Tsy maintsy miangavy izahay hanaisotra ny fanitsakitsahana, ary eritreretiko fa hanatsara ny kalitaon'ny fampitambaovao manerana ny sisintany rosiana izy ity,” hoy i Zharov.
Mamakafaka ny lahatsoratra ao amin'ny tranonkalam-baovao ihany no ataon'ny rindram-bainga sy ny rindram-baiko ampiasain'ny Rosomnadzor. Raha amin'ny votoaty fampitam-baovao marolafy indray dia ny fanazavazavana indray no fakafakain'ny rijan-kajy, ka raha heverina ho miaty fampahafantarana voarara dia alefany amin'ny olona mpanadihady izay handray an-tanana ny raharaha hijery ny dosie.
Voaaramaso ho azy ihany koa ny tsipy hevitra amin'ny tranonkalam-baovao: araka ny nolazain'ny Roscomnadzor, raha mahita fanehoan-kevitra misy votoaty tsy ara-dalàna ny rafi-pitaovana, dia ampahafantariny ilay fampitam-baovao izany, ary manana 24 ora ity farany hamafana izany fanehoan-kevitra manitsakitsaka izany (araka ny didy efa navoakan'ny Fitsarana an-Tampony Rosiana). “Ary mamafa daholo ny rehetra,” hoy i Zharov.
Tany alohaloha tany ny Roscomnadzor efa naminavina hanara-maso ny aterineto rosiana iray manontolo ijerena votoaty eksitiremista saingy tsy nahefa noho ny tsy fahampiam-bola. “Hitanay fa raha jerena ny toe-draharaha ankehitriny sy ny tetibola eo am-pelantanana dia tsy afa-misahana ny aterineto iray manontolo izahay,” hoy ny fiaiken'ny filohan'ny Roscomnadzor tamin'ny Izvestia. “Ka dia ny fampitam-baovao an-tserasera no hofakafakainay ary tsy hikitika ny sehatra (aterineto) hafa izahay.”
Bitika ny zavatra fantatra momba ny rindrambaiko sy rindrambainga ambadik'ilay rafi-pitaovana fanarahamaso mandeha ho azy. Araka ny Roscomnadzor, ny “hoboka famakafakana” (fo) dia manana ny foibeny ao amin'ny foiben'onjampeo rosiana amin'ny ankapobeny, fa tsy misy na inona na inona fantatra kosa momba ny rijan-kajy.
Raha iverenana dia tamin'ny 2011 no nanambaran'ny Roscomnadzor voalohany ny fandraisana tolobidy hananganana rafi-pikarohana sy famakafakana mandeha ho azy ampiasaina amin'ny RuNet. Orinasa iray antsoina hoe “DataCenter” no nahazo ny tolobidy, saingy tsy afa-po tamin'ny tolotra nataony ny Roscomnadzor ary nahita fa tsy mifanaraka amin'ny notadiaviny ny teknika nampiasaina.
Tamin'ny lohataona 2014, notaterin'ny fampitam-baovao rosiana indray ny fikasan'ny mpanaramaso ny media hampandeha ho azy ny fitadiavana votoaty manimbazimba zava-masina na eksitiremista amin'ny tranonkalam-baovao sy ny tambajotra sosialy. Mandritra izany fotoana izany ny Roscomnadzor nampiasa ny rafitr'olonkafa avy amin'ny “Ligin'ny Aterineto Voaaro” hanaraha-maso votoatay tahaka ny sary vetaveta atao amin'ny ankisy sy ny votoaty fandrisihana famonoan-tena, saingy te-hanangana fitaovana manokana ampiasainy hanaraha-maso ireo antso mankany amin'ny herisetra sy ny eksitiremista.
Tamin'ny Avrily 2014 i Zharov filohan'ny Roscomnadzor niteny tamin'ny fampitam-baovao fa “hampiana-tena” ilay rafi-pitaovana ary hampiasa “tondro mpanamarika” hitadiavana ireo fitaovan'ny eksitiremista. Nilaza i Zharov fa nahazo tolotra avy amin'ny foibe matanjaka rosiana mpanadihady “Medialogia” sy ny “Ashmanov sy ny mpiara-mombon'antoka” ny sampana rosiana mpanara-maso ny fampitam-baovao saingy orinasa hafa (tsy fantatra ny anarany) no nalainy hanangana ilay rafi-pitaovana fanaraha-maso.
Araka ny lalàna rosiana dia mamoaka fampitandremana amin'ilay seha-pampitam-baovao amin'ny famoahany votoaty an-tserasera voarara voalohany ny Roscomnadzor. Aorian'ny fampitandremana faharoa amin'io seha-baovao io ihany dia afa-mitondra ny raharaha eny amin'ny fitsarana ny sampana mpanara-maso ny fampitam-baovao ary mangataka ny hanesorana ny fahazoan-dalan'ilay fampitam-baovao.